R/Wasaare Rooble oo qorsheynaya inuu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirrada cusub & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh R/Wasaare Rooble oo qorsheynaya inuu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirrada cusub & Wararkii...
R/Wasaare Rooble oo qorsheynaya inuu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirrada cusub & Wararkii ugu dambeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar ay helayso warbaahinta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed xuseen Rooble uu qorsheeyay in uu ku dhawaaqo liiska golaha Wasiirrada cusub, sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirrada cusub ay u badan yihiin xukumadii hore ee Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa maalmihii la soo dhaafay waday wadatashiyo uu la qadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Liiska golaha wasiirrada ayaa waxaa kaa soo dhex muuqan doona wasiirrada hore iyo kuwa cusub, waxaana qorshuhu ku dhawaaqida yahay 48 saac ee socota.
Ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub
ra'iisul wasaare Rooble